यी राशि भएका व्यक्ति, जसलाई धनि बन्न कसैले रोक्न सक्दैन ! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > यी राशि भएका व्यक्ति, जसलाई धनि बन्न कसैले रोक्न सक्दैन !
admin November 28, 2020 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति	0
वृष राशि: वृष राशिका जातकमा सुन्दर र विलाशी सामान किन्ने शौख हुन्छ । यी राशिका ब्यक्ति स्वतः धेरै धन कमाउन लालायीत हुने गर्दछन् । साथै वैभव प्राप्तिका लागि पनि यस राशिका ब्यक्तिलाई भाग्यमानी मानिन्छन् ।
वृश्चिक राशि: धनी बन्ने सूचीमा वृश्चिक राशिका जातक पनि पर्दछन् । ठूला घर, कार, ब्यापार ब्यवसाय प्रति उनिहरु लिप्त हुन्छन । दृढ निश्चयी भएका कारणले पनि सम्पति कमाउने मामलामा वृश्चिक राशिका ब्यक्ति आफै पनि मेहनत गर्दछन् भने भाग्यले पनि साथ दिने गर्दछ ।
कर्कट राशि: कर्कट राशिका जातकलाई धन, सम्पति कमाउन भाग्यले नै साथ दिने गर्दछ । कर्कट राशिलाई स्वभावत : धनी बनाउन उनिहरुको आकांक्षा र भाग्य बलियो हुने गर्दछ । यी राशिका ब्यक्ति जग्गाजमिनको कारोबारबाट चाडैं धनि बन्ने गर्दछन् ।
सिंह राशि: सिंह राशिका जातकलाई भीडका बिचमा आफ्नो पहिचान बनाउने शौख हुन्छ । उनिहरुलाई सम्पतिको मामलामा राशिले पनि साथ दिने गर्दछ ।
देश, समुन्द्र वा भाषाले समेत छेकेन प्रेमलाई: फिलिपिन्सकि चेली, थारूकि बुहारी..